I-Semalt: Isofthiwe Ye-Best Free Web Scraping
Amathuluzi wokuhlunga iwebhu nesofthiwe yasungulwa ukuze kukhishwe ulwazi kusuka kumasayithi ahlukene amabhulogu. Zibizwa nangokuthi izinhlelo zokuvuna iwebhu noma amathuluzi we-web yokususwa kwedatha. Uma uzama ukuqoqa idatha mayelana nesayithi lakho, ungasebenzisa izinhlelo ezilandelayo ze-web extraction futhi ulandele idatha entsha noma ekhona ngaphandle kwe-hitch.
Isikhwama sokukhwabanisa uhlelo olumangalisayo lwe-web extraction, elisetshenziselwa ukuqoqa idatha kusuka kumakhulu kuya ezinkulungwaneni zamasayithi - best new online casino. Lolu hlelo lusiza ukukhipha nokweqa amakhasi ewebhu ngemizuzwana. Ungasebenzisa noma ukuthekelisa lawo makhasi kumafomethi ahlukene njenge-JSON, SQL, ne-XML. Iyaziwa kakhulu nge-interface yayo yomsebenzisi-friendly, futhi uhlelo lwayo lwe-premium libiza cishe u-$ 50 ngenyanga nge ukufinyelela kwamakhasi wewebhu aphezulu angaphezu kuka-100k.
Yenye enye ithuluzi lokubhuqa lewebhu elivelele . I-Fminer.com isinika ukufinyelela okulula kwi-real-time, ehlelekile, futhi ehlelwe kahle idatha. Ivele idonsa lolu datha ku-inthanethi iphinde isekele izilimi ezingaphezu kuka-200, ilondoloze idatha yakho emafomethi ahlukene njenge-RSS, JSON, ne-XML. Ake sikutshele ukuthi i-Webhose.io yisicelo esisekelwe kusiphequluli esisebenzisa ulwazi olukhethekile ngenkathi idonsa noma ikhipha amakhasi akho wewebhu..
Ngenye yezinhlelo ezinhle kakhulu ze-web extraction kuze kube yimanje. I-PHP Scraper elula yenza ama-datasets ngokungenisa ulwazi kusuka kumakhasi ethize wewebhu nokuthumela idatha kuma-CSV. Kulula ukususa kusuka kumakhulu kuya ezinkulungwaneni zamawebhusayithi namabhulogi emaminithi besebenzisa lolu hlelo. I-PHP Scraper elula isebenzisa ubuchwepheshe obunqenqemeni ukulanda idatha eminingi nsuku zonke, okudingekayo ngamabhizinisi amaningi kanye nemikhiqizo emikhulu. Lolu hlelo luza kokubili kumahhala namahhala futhi lungasetshenziswa kuma-Mac, i-Linux ne-Windows kalula.
I-ScraperWiki inikeza izinsiza kubasebenzisi abaningi futhi iqoqa idatha kunoma yiluphi uhlobo lwesayithi noma ibhulogi. Akudingi noma yikuphi ukulanda; kusho ukuthi kufanele ukhokhele kuphela i-premium version futhi uhlelo luzothunyelwa kuwe nge-imeyili. Ungakwazi ukusindisa ngokushesha idatha yakho eqoqwe kudivayisi yesitoreji sefu noma iseva yakho. Lolu hlelo lusekela kokubili i-Google Drayivu ne-Box.net futhi ithunyelwa njenge-JSON ne-CSV.
Isiqephu siyaziwa kakhulu ngezinguqulo zayo zamahhala nezama-premium. Lolu hlelo lokukhipha iwebhu lusekelwe efwini futhi lusiza lukhipha kusukela kumakhulu kuya ezinkulungwaneni zamakhasi ewebhu nsuku zonke. Ezinye zezinketho zayo ezivelele yi-Crawlera, i-Bot Counter Measure, ne-Crawl Builder. I-Scraper ingashintsha iwebhusayithi yakho yonke ibe okuqukethwe okuhlelekile futhi iyisindise ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo. Ipulani ye-premium izokubiza cishe u-$ 30 ngenyanga.